एउटा प्रश्न, जसले दयाहाङलाई सताउँदैछ
Posted on July 5, 2017 by 99celebrity	एउटा प्रश्न, जसले दयाहाङलाई सताउँदैछRate this post हिरो हुन आर्यन अनुहार, लामो कपाल, कसिलो शरीर, वजनदार आवाज हुनुपर्छ भन्ने सोच तोडेर नेपाली फिल्ममा भित्रिएका फरक अनुहार हुन् दयाहाङ राई । दयाहाङलाई पनि लागेको थियो हिरो हुन कि राजेश हमाल जस्तो ज्यान र उचाई हुनुपर्छ नभए आर्यन सिग्देल जस्तो चकलेटी अनुहार । तर, अहिले सबैका प्रिय नायक बनेका छन् दयाहाङ राई ।
‘लुट’मा निर्वाहा गरेको गोफ्ले चरित्रले दयाहाङलाई एउटा उचाईमा पुरायो । त्यसपछि उनलाई स्टार बनायो फिल्म ‘कबड्डी’ ले । ‘कबड्डी’ पछि दयाहाङले आफ्नो करिअर पछाडि फर्किएर हेर्नु परेको छैन् । तर,’कबड्डी कबड्डी’, ‘झोले’, ‘लुट २’, ‘लोफर’, ‘वडा नम्बर ६’, ‘घामपानी’, ‘लप्पन छप्पन’ हुँदै गएको महिना रिलिज भएको फिल्म ‘लाल्टिन’सम्म आइपुग्दा दर्शकहरुले दयाहाङलाई उस्तै–उस्तै भूमिकामा प्रस्तुत भैरहेको अभिनेताका रूपमा चिने । हुनत, उनले आफ्नो छवि परिवर्तन गर्न नखोजेका होइनन् तर खासै जम्न सकेनन् ।
पुरानै छविलाई निरन्तरता दिँदै आएका उनीमाथि अहिले दर्शकहरुको पनि एउटै जिज्ञासा छ, ‘किन दयाहाङ फरक भूमिकामा देखिन चाहन्नन् ?’ यो प्रश्नको उत्तर उनले नदिएका होइनन् । उनी भन्छन्, ‘आफूले भनेजस्तै भूमिका खोज्न निकै गाह्रो छ । हो, मलाई दर्शकहरुले प्रायः एकै खालको भूमिकामा हेर्दै आउनुभएको छ । यसले मेरा प्रशंसकहरुलाई मात्र होइन मलाई पनि नरमाइलो लाग्छ ।’
फिल्म ‘लाल्टिन’ सम्म आइपुग्दा दयाहाङको एकनासको भूमिकाले दर्शकहरू नै ‘ह्याङ’ हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसै वर्षको बैशाख १ गते रिलिज भएको फिल्म ‘घामपानी’ले पुनः दयाहाङका दर्शकहरुलाई ‘कबड्डी’ कै स्मरण गरायो भने ‘लाल्टिन’ले ‘लप्पन छप्पन’को । अहिले दयाहाङलाई यही एउटा डरले सताउन थालेको छ कि एकै खालको भूमिकामा बारम्बार प्रस्तुत भैरहँदा भोली आफ्नो करिअरलाई कस्तो अफ्ठ्यारो पर्ला ?
एकैखाले भूमिकामा प्रस्तुत भैरहेका कारणले पनि दयाहाङका पछिल्ला फिल्महरुले खासै कमाल गर्न सकेका छैनन् । पुरानै छविलाई निरन्तरता दिने हो अभिनय करिअर कता जाला ? दयाहाङको मनमा अहिले यही एउटा प्रश्नले डेरा जमाएको छ । अब दयाहाङले भोलीका दिनमा आफ्नो छवि परिवर्तन नगरे मिडियामा यो समाचार आउन पनि ढिला छैन कि दयाहाङको हातमा फिल्म छैन् ।
नेपाली एउटा प्रश्न, जसले दयाहाङलाई सताउँदैछ, दयाहाङ राई	Post navigation
रजनीकान्तकी छोरीले गरिन् ‘डिभोर्स’	Nana Visitor Weight, Height, Net Worth, Age, Spouse, Kids & Wiki Search 1000+ Celebrities	Popular Posts	Recent Posts	उषा अब निर्मात्री, बन्ने भयो ‘आउँदै जादै’